Andro: 6 Febroary 2020
Mahazo ireo loka ny kintan'ny ekonomika
Ireo mpikambana mahomby amin'ny Izmir Chamber of Commerce, Aegean Chamber of Industry and Izmir Commodity Exchange dia nahazo ny mari-pankasitrahana tamin'ny lanonana iray natao tao amin'ny Balçova Kaya Thermal Hotel. İZBETON A.Ş., iray amin'ireo mpiara-miasa ao amin'ny Kaominina Izmir Metropolitan, isan'ireo mpandresy amin'ny loka. [More ...]
Ireo escalator sy Elevator dia rava ao Başkent
Ny kaominina ambanivohitra Ankara Metropolitan, ny fitambaran'ny ambanin'ny mpandeha an-tongotra sy ny overspace izay manompo any amin'ireo teboka mampitohy ny fifamoivoizana an-tongotra manerana ny renivohitra nefa tsy mahomby noho ny fampiasana tsy nahatsiaro tena, fanimbana tsy nahy ary ny fanamboarana kalitao tsy tsara. [More ...]
Fanamboarana fananganana Metro Pendik, Dent, 1 mavesatra 4 no naratra
Tamin'ny fananganana tsipika metro teo anelanelan'ny seranam-piaramanidina Sabiha Gökçen sy Pendik, nisy ny mpitsabo nify iray noho ny antony tsy fantatra. Nandritra ny zava-nisy dia lavo teo am-panaovana ireo mpiasa ny vatofantsotry ny crane. Ao amin'ny fanamboarana tonelina ao amin'ny Pendik Yayalar Mahallesi ny lalànan'ny lalamby no tsy fantatra [More ...]
Nanapa-kevitra ny hanafoanana ny fanatanterahana an'io fomba io ny Fitsarana faha-2 ao Sakarya. Noho ny tsy fahazoana mivoaka ny fangatahana ny fanaovana zoning dia tsy ara-dalàna tao Sapanca momba ny faritra hananganana ny tetikasa ropeway. Sakarya Metropolitan ny drafitry ny tompon'ny sehatry ny tetikasa [More ...]
IMM Filohan'ny Ekrem olom-pirenena İmamoğlu naratra tamin'ny lozam-piaramanidina izay nanozongozona Torkia, dia nitsidika ny hopitaly, ary tsaboina ao Kartal Pendik. Niresaka tamin'ny naratra i İmamoğlu, "mandeha haingana" ho an'ireo niharam-boina sy ny havany. [More ...]
Tsiahivina fa ilay fiaramanidina mpiasan'ny Pegasus Airlines, izay nanao ny zotra Izmir-Istanbul niezaka ny hamonjy ny seranam-piaramanidina Sabiha Gökçen, dia nandao ny lalambe. Voalaza fa mihidy vonjimaika vetivety amin'ny seranam-piaramanidina ny seranam-piaramanidina taorian'ny loza. Minisitry ny fahasalamana Fahrettin Koca 180 olona [More ...]